Xildhibaanadii Ugu Badnaa oo Saxiixay Mooshin Xilka Loogu Qaado Farmaajo | Barbaariyaha bulshada
Xildhibaanadii Ugu Badnaa oo Saxiixay Mooshin Xilka Loogu Qaado Farmaajo
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibannada mucaaradka ku ah hoggaanka dowladda Soomaaliya oo la hadlay Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa sheegay inay dalbadeen dib u furista kulamaddda Baarlamaanka Soomaliya iyagoo wada Mooshin ay xilka ugu qaadayaan Maxamed C/llaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaliya.
Mahad salaad ayaa sheegay iney garayaan xildhibaanada wada mooshinka ilaa 96 xildhibaan, kadib kulamo kala gedisan oo ay ku yeesheen Magaalada muqdisho ay isku afgarteen iney gudbiyaan mooshinkaan oo la doonayo in taladada looga tuuro Farmajo.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Warqadda codsiga in uu guddonka dib u furo kal fadhiga Baarlamaanka ay diyaariyeen walina aysan u gudbin Guddoonka,balse ay rajeynayaan iney dhawaan gudbiyaan.
Soo shaac bixida mooshinkaan ayaa kusoo beegmaya xili madaxda dalka ay ciidamo u direen guri uu deganaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur kana mid ah xisbiga mucaaradka ee Wadajir, waxaa halkaas lagu dilay 5-ruux.
Arrimaha lagu heysto madaxweyne Farmaajo ee mooshinka xil ka qaadista loogu diyaariyey ayuu xildhibaan Mahad Salaad ku sheegay:
1- Inuu dastuurka ku xad gudbay
2- Khiyaano Qaran
3- Burburinta dowlad goboleedyada iyo eedemo kale la soco wixii kusoo kordha
Waxaa soo diyaariyay warbixintan Ali Aadan Hashi